Ireo mpisolovava UAE eo an-toerana dia ilaina amin'ny serivisy ara-dalàna | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ilaina amin'ny serivisy ara-dalàna ny mpisolovava UAE eo an-toerana
Mpanolotsaina eo an-toerana
Tena sosotra loatra ny fiezahana mitady mpisolovava UAE mahay sy mahay za-draharaha izay afaka manampy anao hamaha ny sasany amin'ireo faminaniana sarotra indrindra sy mampikorontan-tsaina mety hitranga amin'ny fiainanao.
ambaratonga mahatoky tena
matoky ianao ary afaka mahatoky
Mpanolotsain'ny lalàna anao any UAE
Ianao no tena marefo rehefa mila torohevitra ara-dalàna. Rehefa miady amin'ny olana toy izany ianao, iza no atokisanao sy iankinananao? Izany no ho mpisolovava anao, mazava ho azy.
Mba hahamora kokoa ny fikatsahanao, indreto ireto toetra tsara itadiavana mpisolovava ireto:
Tsy fivadihana sy fahitsiana
Ankoatra ny zava-drehetra, dia irinao ny ho mpisolovava anao hitarika sy tsy mivadika aminao momba ny mety sy tsy azo atao. Mandritra ny fotoana sarotra eo amin'ny fiainanao, ny zavatra farany tadiavinao dia fanantenana diso. Na inona na inona toe-javatra misy anao ara-dalàna, tokony ho eo ny mpisolovava anao mba hanohana anao am-pahatsorana.
Toy izany koa, ny mpisolovava anao dia tokony hanana ihany koa ny haavon'ny tsy fivadihana. Satria izy ireo no hisolo tena anao ao amin'ny tribonaly, tokony hanao fihetsika ambony izy ireo raha maniry ny olona hanaja ny lalàna.
Ny zavatra mahasoa anao indrindra dia tokony ho laharam-pahamehana voalohany amin'ny mpisolovava UAE eo an-toerana. Izy ireo dia tsy maintsy mitantana ny toe-javatra misy anao amin'ny fomba azo atao araka izay azo atao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
Fanitsiana ara-dalàna momba ny lalàna UAE
Ny mpisolovava tsara dia olona manana traikefa be amin'ny sehatry ny ara-dalàna koa. Tokony ho niasa ho an'ny mpanjifa avy amin'ny lafiny rehetra sy ny olana ara-dalàna izy ireo. Mitadiava mpisolovava iray manana traikefa ampy amin'ny toe-javatra iainanao na ny olanao. Raha mila fanampiana amin'ny fisaraham-panambadiana ianao, dia mitadiava mpisolovava iray manana traikefa ampy amin'ity.
Tena zava-dehibe ny fanandramana satria manome ny fahatokisan'ny mpisolovava azy ireo ilainy mba hahafahanao manatratra ny tanjonao.
Fahalalana ampy momba ny lalàna Sharia sy ny UAE eo an-toerana
Tsy misy lohahevitra afaka sarotra sy manankarena toa ny lalàna ary ity sehatra ity dia miovaova sy mivoatra isan'andro. Ny mpisolovava nataonao dia nandany taona maro handinihana mba hahatratrarana ny fahalalana sy ny fahalalana ny lalàna sy ny kolontsaina UAE izay ananany izao. Tsy maintsy mihazona sy mampitombo izany fahalalana izany ihany koa izy ireo amin'ny alàlan'ny fanavaozana hatrany amin'ireo fanovana ary ny fiofanana ilaina.
Misy mpisolovava manana fahalalana manokana na fahazoan-dàlana fanampiny mifanaraka amin'ny toe-javatra manokana anao. Hamarino tsara ny mombamomba azy ireo sy ny fahazoan-dàlana. Ny ankamaroan'ny mpisolovava dia mizara izany fampahalalana izany amin'ny sehatry ny fampianarana.
Fahaiza-manao amin'ny teny arabo sy anglisy tsara
Ny mpisolovava UAE tsara indrindra dia olona manana fomba iray hanambara zavatra mazava sy mora takatra. Tokony ho fantatr'izy ireo hoe rahoviana hanatsotra ny lozisialy lozika amin'ny zavatra azonao atao. Izy ireo koa dia mila misaina, mahira-tsaina ary maranitra rehefa mametraka ny raharaha momba anao eo anatrehan'ny mpitsara sy ny mpisolovava hafa.
Tsy maintsy azon'ny mpisolovava hahatakatra ny mpihaino. Matoky ny mpisolovava anao fotsiny ianao raha azonao ny zavatra ambarany. Rehefa mahatsiaro misafotofoto sy very amin'ny toe-javatra ianao, dia hanjavona amin'ny finoana amin'ny mpisolovava anao ihany.
Raha sendra sahiran-tsaina amin'ny olana ara-dalàna ianao, dia ataovy izay hitadiavana ireo toetra ireo mba hanananao toky antoka fa manana ny mpisolovava marina ianao.
Manome fiarovana mafy izahay ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena amin'ny fahasahiranana
Mora ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena, izay te hanazava ny olana ara-dalàna ao Dubai na UAE